Wayne Rooney Oo Ka Hadlay Feedhkii Uu Koomada Ku Galay
HomeWararka MaantaWayne Rooney Oo Ka Hadlay Feedhkii Uu Koomada Ku Galay
16/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Wayne Rooney ayaa dabbaal-deg kaga jawaabay feedhkii dhulka loogu tuuray ee uu ku xuusiyey laacibka Phil Bardsley oo sida lagu daawaday muuqaallo la baahiyey ay isaga hor yimaaddeen ciyaar feedh-feedh ah kaas oo dhulka loogu tuuray Rooney, isla markaana uu ku galay xaallad miyir beel ah.
Rooney ayaa arrintaas kaga jawaabay in ay ahayd mid riwaayad ah oo ay metelayeen in ay feedh ciyaarayaan isla markaana saiwrro laga qaaday.
Rooney oo Manchester United goolka saddexaad u dhaliyey kulankii Tottenham ee ku dhamaaday 3-0, ayaa waxa uu sameeyey dabbaal-deg cajiib kaas oo isaga oo taagan uu sidii nin sikhraansan ama miyir beelay dib dhulka isugu tuuray isagoo si fidsan dhulka ugu wada dhacay.
Axaddii ayay warbaahinta Ingiriisku baahiyeen Rooney oo xidhan golofisyada feedhka loo xidho iyo koofiyadda madasha la gashado, waxaana sida ka muuqata Video-kaas oo la sheegay in la duubay 22-kii February madaxa lagala helay Rooney hal feedh oo uu koomo ku galay.
Rooney oo markii ay ciyaartu dhamaatay warbaahinta la hadlay isagoo ka jawaabaya dabbaal-deggiisa iyo waliba feedhkaas lagu dawakhiyey ayaa waxa uu yidhi: “Waa dunida aynu hadda ku nool nahay. Waxay ahayd guri gaar ah oo wixii aanu ku samaynay ay warbaahintu bogagga hore ku sawireen. Waa in aan ogolaado, waxa aanu ahayn aniga iyo qaar ka mid ah saaxiibbaday oo kaftamaynay.” Sidaas ayuu yidhi Rooney.
Rooney oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa raaciyey: “Waxay ahayd gurigayga gudihiisa, manay ahayn meel shaaric ah oo dadka loogu talo galay. Waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay saaxiibbadu sameeyaan. Warbaahinta ayaa arrinta xumaysay oo ku soo daabacay bogagga hore ee wargeysyo caalami ah.”
Rooney waxa uu tilmaamay in uu ciyaartiisa oo kaliya diiradda saarayay kulankii Tottenham, isla markaana ay farxad u ahayd in uu kooxdiisa ka caawiyey in ay guul muhiim ah ka gaadhay koox awood badan oo ay iska hor yimaaddeen.
Goals and Highlights : Basel 1-0 Manchester United
22/11/2017 Diiriye Ahmed
Tababare Jose Mourinho Oo Dacwad Lagaga Soo Oogay Waddanka Spain
20/06/2017 Abdiwahab Ahmed
West Ham United 2 – 1 West Bromwich Albion – highlights & Goals
02/01/2018 Abdiwahab Ahmed